ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကရတဲ့ အာဟာရတွေ မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်မလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Phio Thiha မှ ရေးသားသည်။ 07/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားသုံးခြင်းဖြင့် နာတာရှည်ရောဂါအများစုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တခြားကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားတဲ့အခါမှာ ပါဝင်တဲ့ အဟာရတွေအပြည့်အဝ ရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အခုဖော်ပြသွားမှာကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကနေ အာဟာရအပြည့်အဝရအောင် ဘယ်လိုစားသောက်ရမလဲဆိုတာပါပဲ။
လတ်ဆတ်မှလည်း ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အကြာကြီးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းဖို့ မလိုပါဘူး။ မုန်ညင်းရွက်နဲ့ တခြားအစိမ်းရောင်အရွက်ရှိတဲ့ ဟင်းရွက်တွေက အစိုဓာတ်များတဲ့အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ထည့်တဲ့ခွက်ထဲမှာသာ သိမ်းသင့်ပါတယ်။
သင့်လျှော်တဲ့ အပူချိန်မှာ ထားပါ။
အသီးအရွက်တွေက အပူချိန်အမျိုးမျိုးမှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် သိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း အပူချိန်တွေ မတူညီကြပါဘူး။ ရာသီကုန်တွေဖြစ်တဲ့ အာလူးနဲ့ သခွားသီး၊ ပဲတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားရင် အညိုရောင်အစက်အပျောက်တွေ ပေါ်လာပြီး ပျော့ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နဲ့ အမြစ်ပါတဲ့ အသီးအနှံတွေကတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထောပတ်သီးကို ထားရင်တော့ မမှည့်နိုင်တဲ့အတွက် အလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာမှာ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
အာလူးတွေကို မြန်မြန်မမှည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာမှာ သိမ်းပါ။ အစိုဓာတ်ရှိတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ ချွဲပျစ်ပျစ်ကြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးကနေထွက်တဲ့ အီသလင်းဓာတ်ငွေ့က အသီးအနှံတွေ ရင့်မှည့်စေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သစ်သီးတွေ အလျင်အမြန် မှည့်လိုလျှင် ငှက်ပျော်သီးနဲ့ ရောသာထားလိုက်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလျှင် အလွယ်တကူအနံ့ပြယ်နိုင်ပြီး မြန်မြန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆားက ဟင်းလျာတော်တော်များများရဲ့ အရသာကို ပိုပြီးကောင်းစေတာမှန်ပေမယ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လှီးဖြတ်ပြီးသား အသီးအရွက်တွေကို ဆားရည်နဲ့ ဆေးလိုက်တာက အထဲမှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
စွပ်ပြုတ်လုပ်တာကလွဲလို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ချက်ပြုတ်ဖို့ မီးပြင်းပြင်းမလိုအပ်ပါဘူး။ အပူချိန်မြင့်ရင် အသီးအရွက်မှာ ပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်တွေကို ဆုံးရှုံးစေပါတယ်။
1. Reference: How to avoid ruining the vegetables. http://hellodoktor.com/healthy-living/fitness-nutrition/avoid-ruining-vegetables/. Accessed on March 24,2017
2. 10 important tips for keeping veggies fresh in the refrigerator. https://www.berrybreeze.com/10-tips-to-keep-vegetables-fresh-in-your-refrigerator/. Accessed on March 24,2017
3. How to keep your veggies vitamin-packed. http://www.webmd.com/food-recipes/features/how-to-keep-your-veggies-vitamin-packed#2. Accessed on March 24,2017